Vaovao - Ny vokatry ny ginseng mena dia tsy vitan'ny hoe manatsara ny ra sy mahasoa ny qi
Ny vokatry ny ginseng mena dia tsy vitan'ny hoe manatsara ny ra sy mahasoa ny qi
Ginseng menadia karazana fanafody raokandro izay voahodina sy vita amin'ny ginseng, ary anana mahazatra indrindra amin'ny fitsaboana sinoa.Eo amin’ny fiainantsika andavanandro dia maro koa ny olona mihinana ginseng mena mba hamelona ny vatantsika.Inona avy ireo tombontsoa sy voka-dratsin'ny ginseng mena ho an'ny vatantsika?ArahoFuyang Bestopraha te hahalala bebe kokoa momba ity fanontaniana ity.
1, Anti-fatigue, manatsara ny tsimatimanota
Ginseng menabe otrikaina ary afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fanoherana ny viriosy ny vatana.Izy io koa dia afaka manatsara ny soritr'aretin'ny havizanana vokatry ny asa, ny fianarana ary ny fanatanjahan-tena.
2. Mamelona ny ra sy manatsara ny fahavelomana
Fantatsika rehetra fa ny ginseng no tonika tsara indrindra, ary ny ginseng mena, amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny ginseng, dia afaka mitana anjara toerana tsara amin'ny famelomana ny ra sy ny tombontsoan'ny qi.Ho an'ny olona mijaly amin'ny tanana sy tongotra mangatsiaka, malemy ny rantsambatana ary fanina, ny fihinanana ginseng mena dia mety hisy fiantraikany tsara amin'ny tonika.
3. Fisorohana ny tosidra ambony sy ny arteriosclerose
Ny fanadihadiana dia naneho fa ny ginseng mena dia afaka mandrindra tsara ny fiasan'ny hery fiarovana ary mampihena ny viscosity ny ra, izay afaka mitana anjara toerana roa tsara amin'ny fandrindrana ny tosidra.Ankoatr'izay, ny ginseng mena dia manana hetsika manohitra ny taratra ary miasa amin'ny fampihenana ny votoatin'ny tavy amin'ny vatana.
4. Mampitony ny saina sy manatanjaka ny atidoha
Araka ny fitsaboana sinoa,ginseng menaafaka manampy amin'ny famelomana ny taova dimy, mampitony ny fanahy ary manala ny fanahy ratsy.Noho izany, ny fihinanana ginseng mena maharitra dia mety hisy fiantraikany tsara amin'ny fampitoniana ny saina sy ny famelomana ny atidoha.Ho an'ny olona voan'ny tsy fahitan-tory matetika sy mahantra fitadidiana, ny ginseng mena dia safidy tsara, indrindra ho an'ny vehivavy ao anatin'ny menopause.
Miaraka amin'ny tombontsoa be dia be, dia mila misoroka ny sasany contraindications rehefa mihinana ginseng mena.
Voalohany indrindra, tokony ho takatsika fa ny ginseng mena dia tsy mety amin'ny olon-drehetra, indrindra ho an'ireo manana lalàm-panorenana manokana, toy ireo manana tsy fahampian'ny Yin sy afo, aretim-pivalanana amin'ny atidoha, fahasosorana ary tazo, izay tokony hialana amin'ny fihinanana ginseng mena.Raha tsy izany dia mety hiharatsy ny soritr'aretina ary hiteraka fanina sy aretin'andoha ary koa fiakaran'ny tosidra.
Ny ginseng mena dia tsy soso-kevitra ihany koa ho an'ny tanora amin'ny dingan'ny fivoarana, satria mety hiteraka fahamaotiana mialoha.
Ny teboka iray hafa tokony homarihina dia na dia tsara ho an'ny olona voan'ny hypertension aza ny ginseng mena.Tsy maintsy ankatoavin'ny dokotera matihanina alohan'ny hihinananao azy.Satria maro ny marary amin'ny fiakaran'ny tosidrà no manana aretina hafa mitambatra, raha mihinana ginseng mena an-jambany ianao, dia mety hisy vokany mifanohitra amin'izany.
Amin'ny fiainantsika andavanandro dia maro ny fomba fihinanana ginseng mena, toy ny fandrahoan-tsakafo miaraka amin'ny akora sasany, ny fanaovana dite, ny fandoroana azy ary ny fihinanana azy mivantana amin'ny vava, sns ... Misy koa ny manoto ny ginseng mena ho vovoka dia maka azy avy eo.
Rehefa mihinana sakafo ara-pahasalamana isika dia tsy maintsy manamarina aloha raha mety amintsika ilay sakafo, na dia tsara toy inona aza.Raha tsy mety aminao izany dia tsy hanampy izany.Zavatra marina ny misafidy ny haka azy amin'ny fepetra mety aminao.
Raha liana amin'ny ginseng mena ianao dia mifandraisa aminayinfo@goherbal.cnFARAN'IZAY HAINGANA INDRINDRA.
Fotoana fandefasana: Apr-25-2022